लूका १६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१६ त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई यसो पनि भन्नुभयो: “कुनै धनी मानिसको एक जना भण्डारे थियो र उसले सम्पत्ति हिनामिना गर्दैछ भन्ने खबर तिनको कानमा पऱ्यो। २ त्यसैले तिनले उसलाई बोलाएर भने: ‘म यो के सुन्दैछु? लौ, मलाई एक-एक हिसाब बुझाऊ। अब उसो तिमीले मेरो कारोबार सम्हाल्नेछैनौ।’ ३ तब त्यस भण्डारेले मनमनै भन्न थाल्यो: ‘मेरो मालिकले मलाई भण्डारेको कामबाट निकाल्ने भए, अब म के गरूँ? म खनजोत गर्न सक्दिनँ, भीख माग्न मलाई लाज लाग्छ। ४ अँ, मैले के गरें भने भण्डारेको कामबाट निकालिएपछि पनि मानिसहरूले मलाई उनीहरूको घरमा आश्रय दिनेछन्‌, त्यो मलाई थाह छ!’ ५ उसले आफ्नो मालिकका ऋणीहरूलाई पालैसित आफूकहाँ बोलायो र पहिलोचाहिंलाई सोध्यो: ‘तिमीले मेरो मालिकलाई कति ऋण तिर्नुछ?’ ६ उसले जवाफ दियो: ‘बाइस सय लिटर* जैतुनको तेल।’ त्यस भण्डारेले उसलाई भन्यो: ‘तिम्रो तमसुक लैजाऊ र बसेर तुरुन्तै त्यसलाई एघार सय बनाइहाल।’ ७ त्यसपछि भण्डारेले अर्कोलाई भन्यो: ‘तिम्रो चाहिं कति ऋण छ नि?’ उसले भन्यो: ‘एक सय सत्तरी क्विन्टल* गहुँ।’ तब भण्डारेले उसलाई भन्यो: ‘तिम्रो तमसुक लैजाऊ र त्यसलाई एक सय छत्तीस बनाइहाल।’ ८ त्यो भण्डारे बेइमान भए तापनि मालिकले उसको तारिफ गरे, किनकि उसले चतुऱ्याइँ देखायो। म यसकारणले यसो भन्दैछु, किनकि आफ्नो पिंढीका मानिसहरूसित व्यवहार गर्नमा ज्योतिका सन्तानहरू भन्दा यस युगका मानिसहरू अझ चतुर छन्‌। ९ “साथै, म तिमीहरूलाई भन्छु, बेइमान धनले आफ्नो निम्ति मित्रहरू बनाओ, किनभने त्यस्तो धन सिद्धिएपछि तिनीहरूले सायद अनन्त निवासमा तिमीहरूलाई आश्रय दिनेछन्‌। १० जो मानिस सानो कुरामा विश्वासिलो छ, ऊ धेरै कुरामा पनि विश्वासिलो हुन्छ अनि जो सानो कुरामा बेइमान छ, ऊ धेरै कुरामा पनि बेइमान हुन्छ। ११ त्यसैले यदि बेइमान धन चलाउँदा तिमीहरू आफूलाई विश्वासिलो साबित गर्दैनौ भने कसले तिमीहरूलाई साँचो धन सुम्पेला र? १२ जे कुरा अरूको हो, त्यसमा त तिमीहरू आफूलाई विश्वासिलो साबित गर्दैनौ भने जे कुरा तिमीहरूका लागि साँचिएको छ, त्यो कसले तिमीहरूलाई देला र? १३ कुनै पनि नोकर दुई मालिकको दास बन्न सक्दैन; किनकि उसले एक जनालाई घृणा र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ अथवा ऊ एक जनासित टाँसिनेछ र अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरू परमेश्वर र धनसम्पत्ति दुवैको दास बन्न सक्दैनौ।” १४ पैसाको प्रेमी फरिसीहरूले यी सबै कुरा सुनिरहेका थिए र तिनीहरूले नाक चेप्य्राउँदै उहाँको खिल्ली उडाउन थाले। १५ त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू मानिसहरूसामु धर्मी भई टोपल्छौ, तर तिमीहरूको मनमा के छ, परमेश्वरलाई थाह छ। किनकि मानिसहरू जुन कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन्‌, परमेश्वरको नजरमा त्यो घिनलाग्दो हुन्छ। १६ “किनकि व्यवस्था र भविष्यवक्ताका वाणीहरू यूहन्नाको समयसम्म घोषणा गरिए। त्यसदेखि यता परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार घोषणा हुँदैछ र हर प्रकारका मानिसहरू त्यहाँभित्र पस्न अघि बढ्दैछन्‌। १७ व्यवस्थाको एउटा अक्षरको एउटा बिन्दु पूरा नभई मेटिजानुभन्दा आकाश र पृथ्वी बितेर जानु बरु सजिलो हुनेछ। १८ “जसले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्छ र अर्कीसित विवाह गर्छ, उसले परस्त्रीसित यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिन्छ। अनि आफ्नो पतिसित सम्बन्धविच्छेद भएकी स्त्रीसित जसले विवाह गर्छ, उसले परस्त्रीसित यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिन्छ। १९ “एक जना धनी मानिस थियो। ऊ बैजनी रङ्गको दामी लुगा लगाउँथ्यो र सुखविलासको जीवन बिताउँथ्यो। २० उसको ढोकाबाहिर भने जीउभरि घावैघाउ भएको लाजरस नाम गरेको माग्नेलाई मानिसहरूले ल्याएर राखिदिन्थे। २१ अनि ऊ त्यस धनी मानिसको टेबुलबाट झरेको टुक्राटाक्री खाएर आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। यहाँसम्म कि, कुकुरहरू पनि आएर उसको घाउ चाट्थे। २२ केही समयपछि त्यो माग्ने मऱ्यो अनि स्वर्गदूतहरूले उसलाई बोकेर अब्राहामको काखमा राखिदिए। “साथै, त्यो धनी मानिस पनि मऱ्यो र उसलाई गाडियो। २३ अनि चिहानमा* सास्ती खाइरहेको बेला नजर उठाएर हेर्दा उसले धेरै पर अब्राहामलाई अनि लाजरसलाई चाहिं तिनको काखमा ढल्किरहेको देख्यो। २४ त्यसैले उसले यसो भनेर पुकाऱ्यो: ‘हे बुबा अब्राहाम, ममाथि कृपा गर्नुहोस् र आफ्नो औंलाको टुप्पो पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पार्न लाजरसलाई मकहाँ पठाइदिनुहोस्। किनकि दनदनी बलिरहेको यो आगोमा म तड्पिरहेको छु।’ २५ तर अब्राहामले उसलाई यस्तो जवाफ दिए: ‘बाबु, नबिर्स, तिमीले आफ्नो जीवनभर असल-असल थोक सबै पायौ तर लाजरसले भने पीडाबाहेक केही पाएन। त्यसैले अहिले ऊ यहाँ आरामसित बसिरहेको छ तर तिमी भने तड्पिरहेका छौ। २६ यी सब कुराबाहेक, तिमीहरू र हामीबीच ठूलो खाडलको अन्तर छ। त्यसैले न तिमीहरूकहाँ जान चाहनेहरू यहाँबाट जान सक्छन्‌ न त हामीकहाँ आउन चाहनेहरू नै त्यहाँबाट आउनसक्छन्‌।’ २७ यो सुनेर उसले भन्यो: ‘त्यसो हो भने हे बुबा, उसलाई मेरो बुबाको घरमा पठाइदिनुहोस्। २८ किनकि मेरा पाँच भाइ छन्‌ र उसले तिनीहरूलाई राम्ररी सम्झाइबुझाइ गरिदेओस्, ताकि तिनीहरू पनि सास्ती पाउने यस ठाउँमा आउन नपरोस्।’ २९ तर अब्राहामले जवाफ दिए: ‘तिनीहरूसित मोशा अनि भविष्यवक्ताहरू छन्‌, तिनीहरूले उनीहरूकै कुरा सुनून्‌।’ ३० अनि उसले भन्यो: ‘हैन, बुबा अब्राहाम, यदि मरेकाहरूमध्येबाट कोही एक जना तिनीहरूकहाँ गयो भने तिनीहरूले पश्‍चात्ताप गर्नेछन्‌।’ ३१ तर अब्राहामले उसलाई जवाफ दिए: ‘यदि तिनीहरू मोशा र भविष्यवक्ताहरूको कुरा सुन्दैनन्‌ भने मरेकाहरूमध्येबाट उठेको कोही एक जनाको कुरा पनि तिनीहरूले मान्नेछैनन्‌।’ ”
^ लूका १६:६ * शाब्दिक, “१०० बाथ।” एक बाथ बराबर लगभग २२ लिटर हुन्थ्यो।
^ लूका १६:७ * शाब्दिक, “१०० कोर।” एक कोरमा लगभग १७० किलो गहुँ हुन्थ्यो।
^ लूका १६:२३ * ग्रीकमा “हेडिज।” अतिरिक्त लेख ८ हेर्नुहोस्।